15 Side Gigs oo kaa dhigi kara inaad ka taajirsan tahay shaqo waqti -buuxa ah - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn 15 Side Gigs oo kaa dhigi kara inaad ka taajirsan tahay shaqo waqti buuxa ah
Lacag dheeraad ah oo dhinaca laga sameeyo waxay noqon kartaa mid fudud haddii aad taqaanid waxaad raadineyso.
Helitaanka mid ka mid ah shaqooyinka dhinaca ugu weyn waxaa jira hab aad u wanaagsan oo lagu gaari karo yoolkaaga, haddii aad rabto inaad iska bixiso deynta ardayga, bilow inaad keydsato tigidh weyn, ama aad dhisto sanduuq mustaqbalka ah.
Qaar ka mid ah shaqooyinka dhinaca ayaa si fiican u bixiya si aad uga fikirto inaad ka tagto shaqadaada waqti-buuxa si aad waqti badan ugu siiso.
Maqaalkan, waxaan soo diyaarinay liis ay ku qoran yihiin 15 gigs oo dhinacyo kaa dhigi kara inaad ka hodanto shaqo waqti-buuxa ah.
Waa maxay Side Gig?
Riwaayad dhinaca ah oo sidoo kale loo yaqaan hustle side ama shaqo dhinac waa shaqo labaad oo qofku shaqeeyo marka lagu daro shaqadiisa caadiga ah si uu u kabo dakhligiisa. Shaqooyinka dhinaca ah waxaa loo samayn karaa daruuri ahaan, sida marka qofka shaqadiisa ugu weyn si aan ku filnayn loo bixiyo si loo taageero, ama si uun loogu kabo dakhliga qofka.
Ka shaqaynta dhinac dhinac ah waxaa loogu yeeraa sida dayax -madoobaadka si aan rasmi ahayn marka la sameeyo ka baxsan saacadaha shaqada ee caadiga ah. Shaqada dhinac waxay noqon kartaa shaqo waqti-buuxa ah, qandaraas waqti-dhiman ah, ama shaqo madax-bannaan, qofkuna wuxuu qaban karaa shaqooyin dhinacyo badan isku mar ah.
Sababtoo ah fadhiidnimada mushaharka iyo kororka mushaharka oo aan la jaanqaadin qiimaha kororka maciishadda, shaqooyinka dhinacyadu waxay caan ku noqdeen Maraykanka, iyadoo in ka badan saddex meelood meel dadka shaqooyinka dhinaca ahi ay bixiyaan biilasha. Ku dhawaad ​​kala bar dhammaan dadka Mareykanka ah, oo ay ku jiraan 43% shaqaalaha waqtiga buuxa, waxay leeyihiin shaqo dhinac ah.
Sababta ugu badan ee dadku u qaataan shaqooyin dhinac ah waa inay kaabiyaan dakhligooda. Boqortooyada Ingiriiska, 60% ardayda iyo ardayda qalin jabisay waxay sheegeen inay haystaan ​​shaqo waqti-dhiman ah, 43% waxay sheegeen inay u baahan yihiin si ay u bixiyaan kirada.
Millennials -ka ayaa ah jiilka ay u badan tahay in ay yeeshaan jahawareer dhinac ah, sida caadiga ah “shabakad badbaado” oo maaliyadeed, iyaga oo kasbanaya moniker -ka “jiilka hustle side”. Si kastaba ha ahaatee, waxay caan ku yihiin sidii loo bixin lahaa amaahda ardayga iyo in hal -abuurnimada qofka loo adeegsado siyaabo aan ka suurtoobi karin shirkad dhaqameed.
Mararka qaarkood waxaa lagu tilmaamaa “shaqo maalmeed” marka shaqooyinka asaasiga ah ee qofka kaliya ay bixiyaan dakhli si ay u sii wataan xirfaddooda dhinaca ay doorteen.
1. Khabiirka Daryeelka Cawska
Mushaharka celceliska: $ 55 / saacaddii
Mid ka mid ah Side Gigs-ka lacagta badan leh ee kaa caawin doona inaad dhaqso u hodanto ayaa noqda khabiir Daryeelka Cawska.
Asal ahaan, khabiirada daryeelka cawska ayaa aqoon u leh noocyada kala duwan ee cawska iyo shuruudaheeda, oo ay ku jiraan xakamaynta haramaha, hawo-mareenka, iyo cuncunka. Waxay fahmaan alaabta cawskaagu u baahan yahay, iyo sidoo kale goorta iyo sida loo adeegsado.
Waxaad u shaqayn kartaa waqti-dhiman sidii xirfadle daryeelka cawska haddii aad tahay macallin, dab-demis, ama xitaa arday jaamacadeed. Goynta cawska ee shirkad sida Greenxty ayaa laga yaabaa inay ku kasbato qiyaastii $ 55 saacaddii celcelis ahaan.
Akhri Sidoo kale: 20 Hustles Side Paying High ee Kanada hadda waad bilaabi kartaa
Shaqo kale oo dhinac ah oo ku siin karta wax ka badan shaqo waqti-buuxa ah ayaa u shaqaysa sidii TaskRabbit.
TaskRabbit asal ahaan waa suuq Mareykan ah oo internetka iyo suuq guur -guura oo ka shaqeeya qabashada shaqo madax -bannaan. Shaqadani waxay kuu oggolaaneysaa inaad bixiso shaqooyin maalin kasta ah sida nadaafadda, guuritaanka, gaarsiinta, iyo shaqada gacanyaraha.
Waxa kaliya oo ay qaadataa waa safar TaskRabbit.com, halkaas oo aad ku dooran karto shaqooyinka aad rabto inaad qabato. Waxaad bilaabi kartaa dhammaystirka shaqada - iyo qaadashada mushaharka - marka lagu lammaaneeyo kuwa u baahan caawimadaada.
Markaad dooratid hawl, degelku wuxuu soo bandhigi doonaa qiimayaasha saacadlaha ah ee hawl -wadeennada ugu fiican. Intaas ka dib, waxaad awoodi doontaa inaad doorato qiimeyntaada.
Dhammaan shaqooyinka waxay u baahan yihiin ballanqaadka ugu yar ee hal-saac ah, lacag-bixintana si ammaan ah oo ammaan ah ayaa loogu maamulaa internetka.
Sida laga soo xigtay diiwaanka, waxaad kasban kartaa qiyaastii $ 70 saacad kaliya haddii aad isku laabto funaanadaha, $ 65 saacaddii qaadista culus, iyo $ 80 guuritaanka. Miyaanay taasi xiiso lahayn?
Arag sidoo kale: 21 Dhaqdhaqaaqa Lacag -bixinta Sare ee Macallimiinta Hadda Waad Bilaabi Kartaa
3. Khabiir Ku -Xad -dhaafka Duuliyaha
Mushaharka Celceliska: $ 150
Miyaad safar badan tahay? Miyaad ogtahay inaad isticmaali karto mayl -duulimaadyo isdaba joog ah si aad lacag badan u kasbato? Adigoo noqda khabiir ku xeeldheer waraaqaha waxaad heli kartaa heshiisyada ugu fiican noloshaada.
Run ahaantii tani waa shaqo bilow fiican kuu ah gaar ahaan haddii aad qorshaynayso inaad u soo gudubto warshadaha diyaaradaha.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad samayso waa inaad qorshayso meelaha socdaalka ee safrayaasha kale. Haddii aad khibrad leedahay, waxaad kasban kartaa ilaa $ 150 kaliya qorshaynta hal safar. Haddii aadan ahayn, waxaad sidoo kale kasban kartaa qiyaastii $ 80 taas oo aan aad u xumayn.
4. Qoraaga Hagaha Magaalada
Isugeynta Mushaarka: $ 500
Ma jeceshahay magaaladaada si aad ugu raaxaysato u sheegida dadka? Haddii aad tahay, taasi waa fiicantahay. Laakiin ma ogtahay intaad si farxad leh uga hadleyso inaad weli lacag ku samayn karto hawsha? Haa, waad awoodaa!
Markaad qaadatid shaqada qorista hagaha magaalada, waxaad siin doontaa aragti maxalli ah oo gaar ah oo ku saabsan tirakoobka magaalada, tirada dadka, dhaqanka, iyo xitaa madadaalada. Sidoo kale, waxaad ka sheekayn doontaa madadaalada magaalada, waxqabadyada, nidaamka gaadiidka dadweynaha iyo waxyaabo kaloo badan.
5. Baraha Dijital ah
Mushaharka Celceliska: $ 30 saacaddii
Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka dhinaca ah oo kaa dhigi kara hodan.
Adigoo ah macallin dhijitaal ah ama onlayn ah, waxaad noqon kartaa joogitaan wax -baris si aad ugu abuurto naqshad waayo -aragnimo waxbarasho oo muhiim ah adiga iyo ardayda kula dhigata.
Waxa kale oo aad si taxaddar leh u fududayn kartaa nuxurka taageeri doona barashadaada fasalka dhexdiisa. Waxaad samayn kartaa ilaa $ 30 saacaddii kaliya adiga oo dunida la wadaagaya aqoontaada wax gaar ah.
6. La -taliyaha Dharka
$ 50 ilaa $ 500/saacaddii
Shaqada dhinaca ah oo ah la taliyayaasha moodada ee macaamiisha dhamaadka-sare ah ayaa laga yaabaa inay diyaar u yihiin fashionistas oo isha ku haysa isbeddellada hadda jira.
Macaamiisha qaarkood waxay diyaar u yihiin inay bixiyaan lacag aad u badan talooyinka moodada, iyagoo aaday ilaa ay iibsadayaashooda gaarka ahi doortaan xirmooyin dhan xilliyo kala duwan.
Waxaad la kulmi doontaa macaamiisha sida lataliyaasha moodada si aad wax uga ogaato waxyaabaha ay jecel yihiin, neceb yihiin, shakhsiyaadka, iyo hamiga qaabkooda. Stylists -ka caqliga badan waxay kasban karaan meel kasta $ 50 illaa $ 500 saacaddii, sida laga soo xigtay Mashruuca Xirfadda Farshaxanka.
7. Xisaabiye Sare
Mushaharka Celceliska: $ 45/saacaddii
Dhaqdhaqaaq dhinac kale ah oo ku siin kara wax ka badan xoogaa shaqo waqti-buuxa ah waa kan. Adiga ayaa mas'uul ka noqon doona warbixinta kharashyada, wax soo saarka, xadadka, iyo kharashyada shirkadaha iyo ururada sida xisaabiye sare.
Si ka duwan xisaabiyeyaasha da'da yar, mar dambe lagamama rabo inaad qabato hawlaha maamulka sida xog ururinta, xajmiga dheelitirka, ama cusboonaysiinta gelitaanka joornaalka.
Waxaad kasban kartaa ilaa $ 45 saacaddii laakiin haddii aad rabto inaad kasbato wax ka sareeya, waxaad u baahan doontaa ugu yaraan 5 sano oo waayo -aragnimo ah.
8. Khabiirka Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada
Celceliska Saacadda Saacadda ah: $ 30
Ganacsiyada iyo summadaha, warbaahinta bulshada ayaa u xuubsiibatay aalad iibsi oo xoog leh, shirkadahaani waxay ku tiirsan yihiin khubarada suuqgeynta si loo hubiyo in ololahooda warbaahinta bulshada ay guuleystaan.
Ololayaal ayaa la abuuraa, xeelado ayaa la sameeyaa, iyo waxyaabaha ku jira warbaahinta bulshada waxaa qorey xirfadlayaashan.
9. Iibiyaha Internetka
Celceliska Saacadda Saacadda: $ 46
Dib -u -iibiyaha ahaan, isagoo isha ku haya gorgortan ayaa si fiican u bixin kara. Iibinta walxaha wax ka badan intaad ku bixisay eBay, Craigslist, ama barnaamijyo sida Poshmark ayaa laga yaabaa inay noqoto shaqo dhinacyo badan leh, haddii dantaadu tahay dhar, kabo, ama wax kale oo mugdi ah.
Alexandra Marquez, oo ah khabiir ku takhasustay dukaanleyda iibiya alaabaha ay ka hesho Poshmark, ayaa u sheegtay Business Insider inay ka tagtay shaqadeedii $ 50,000-sannadkiiba si ay waqti buuxa uga shaqeyso ganacsigeeda dib u iibinta. Hadda waxay bil walba heshaa $ 5,000.
10. Qoraa Manhajka
Celceliska Saacadda Saacadda: $ 50 saacaddii
Ma macalin baad tahay? Miyaad u baahan tahay riwaayado dhinac ah si aad u buuxiso dakhligaaga billaha ah? Hadday haa tahay, markaa isku day inaad u shaqayso qoraa manhaj.
Qoraa manaahij ahaan, waxaad heli kartaa riwaayado aad ku qorto oo aad ku hormariso manhajyada iyo hagaha waxbaridda.
Shaqada, waxaad ku kasban kartaa ilaa $ 50 saacaddii, taas oo ka baxsan mushaarkaaga. Miyaadan u malayn inay mudan tahay inaad isku daydo?
11. Takhasuska Waxbarashada iyo Tababarka
Mushaharka celcelis ahaan saacaddii: $ 34/saacaddii
Samaynta ama baro aqoon isweydaarsiyo, siminaaro, ama koorsooyin, iyo sidoo kale qiimaynta ka qaybgalayaasha iyo dejinta manhajka waxa aad baraan, dhammaantood waa qayb ka mid ah shaqadan. Celceliska mushaharka, sida laga soo xigtay FlexJobs, waa $ 34 saacaddii.
12. Kaaliyaha Fulinta
Celceliska Saacadda Saacadda: $ 38.
Kani waa shaqo dhinac kale ah oo si fiican kuu bixin karta. Halkan, waxaad ku kasban kartaa ilaa $ 38 kaliya shaqooyinka maamulka sida taageeridda fulinta ururka, maaraynta waajibaadka maaraynta xafiiska, bixiyaan taageero wadaad, iyo shaqaalaha tababarka.
Moreso, waxaad mas'uul ka noqon kartaa Dejinta shirarka, ka jawaabista emaylka, iyo la socoshada ballamaha.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad leedahay khibrad dhawr sano ah oo ku jirta suunkaaga, waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad hesho shaqooyin kaaliye fulineed fog iyo waqti dhiman ah, sida ay sheegtay FlexJobs.
13. Maamulaha NetSuite
Celceliska Saacadda Saacadda: $ 70
Aqoonta NetSuite, xirmo softiweer oo u oggolaanaysa ganacsiyada inay hal meel ku wada maareeyaan dhammaan dhaqdhaqaaqyadooda ganacsi, ayaa kaa caawin kara inaad hesho heeso dhinac ah.
Waxaad u adeegsan kartaa NetSuite si aad u abuurto beero caadooyin ah, warbixinno, iyo KPI -yada, iyo sidoo kale sameynta qulqulka shaqada iyo naqshadeynta iyo hirgelinta xalalka NetSuite oo ah maamule NetSuite.
14. Maareeyaha Mashruuca
Celceliska Saacadda Saacadda: $ 65
Ku shaqaynta maareeyaha mashruuca waa riwaayad dhinac kale ah oo lacag badan bixisa. Halkan waxaad mas'uul ka noqon doontaa maareynta mashruuca maalinlaha ah waana inaad karti u leedahay maareynta lixda dhinac ee a mashruuca, ie baaxadda, jadwalka, maaliyadda, halista, tayada, iyo kheyraadka.
Shaqadan dhinacana, waxaad kasban kartaa ilaa $ 65 iyo ka badan saacaddii. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad raadiso shaqooyin madax -bannaan oo u baahan kartidahan, sida maaraynta waqtiyada, miisaaniyadda, iyo isku -dubaridka xubnaha kooxda.
15. Takhasuslaha Jiilka Hoggaaminta
Mushaharka Celceliska; $ 30 saacaddii
Ugu dambayn laakiin ugu yaraan liiskayaga riwaayadaha dhinac ee ku siin kara wax ka badan shaqooyinka waqti-buuxa ah waa khabiir jiilka Hoggaaminta.
Adigoo ah xirfadle jiil horseed ah, waxaad ka shaqayn doontaa qaybta B2B oo mas'uul ka ah helitaanka iyo falanqaynta tilmaamaha cusub.
Si kastaba ha noqotee, mas'uuliyaddaada koowaad waxay noqon doontaa inaad abuurto tilmaamo cusub iyada oo loo marayo suuq-geynta dibadda ama soo-gelinta oo hore u-qalmin iibinta.
Talooyin loogu talagalay Gigs Side Guul leh
Halkan waxaa ah talooyin aad qaadan karto haddii aad rabto in geesahaagu si buuxda u guuleystaan:
1. Noqo Geesi
Markaad weydo wax aad lumiso, ma jirto fikrad aad u waalan. Markaa ha ka labalabeyn inaad tijaabiso wax cusub - waxaa laga yaabaa inaad suuq weyn u ogaato awoodahaaga iyo danahaaga gaarka ah.
Dad badan oo guul -darraystayaal ah oo shaqaynaya ayaa shaqadooda labaad si khalad ah u hela. Wax u fudud sida xayawaanka u fadhiya saaxiib, tusaale ahaan, ayaa laga yaabaa inay si degdeg ah u siiso barkin dhaqaale.
Oo haddii aadan hubin in ikhtiraacaaga duurjoogta ah ama fikraddaadu ay leedahay cimri dherer, ka bilow shey tijaabo ah ama adeeg ama samee jilitaan jilicsan si aad u aragto nooca warcelin ee aad hesho.
2. Sii waqti uu ku guulaysto
Markay dadku go'aansadaan inay sameeyaan riwaayad dhinac ah, mid ka mid ah khaladaadka ugu badan ee ay sameeyaan ayaa ah inay ka quustaan ​​inay lacag sameeyaan dhaqso. Waa inaad ogaataa in sameynta riwaayad dhinaca wanaagsan ah ay qaadato waqti.
Taasi waa sababta, haddii aad isku dayeyso inaad lacag ku abuurto riwaayad dhinac ah, waa inaad siisaa xoogaa waqti ah oo aad siisaa fursad ay ku barwaaqowdo halkii aad ka tagi lahayd markay arrimuhu adkaadaan.
Haddii aad furtay degel ama barnaamij, ha filan inay isla markiiba dakhli soo saarto. Kuwani waa durdurro dakhli oo fog oo qaadan kara sanado in la dhiso.
Haddii aad raadineyso riwaayado dhinac ah oo kuu oggolaan doona inaad si dhakhso leh u kacdo oo aad u shaqeyso, tixgeli adeeg sida Uber, DoorDash, ama suuq kale oo gig ah oo la mid ah oo horeyba u lahaa taraafikada webka iyo wacyigelinta astaanta si ay kaaga caawiso inaad isla markiiba ku guuleysato.
3. Samee doorasho aad jeceshahay
Helitaanka lacag dheeraad ah ayaa laga yaabaa inay noqoto mid lagu raaxeysto, laakiin haddii aadan sameynin wax aad xamaasad u qabto, si dhaqso ah ayey u daali doontaa.
Taasi waa sababta, marka aad dooranayso riwaayad dhinac ah, hubso inay tahay wax aad u malaynayso inaad ku raaxaysan lahayd samaynta mustaqbalka fog. Qulqulka maalinlaha ah ee la isku dayo in qofka dakhligiisa lagu kabo shaqo dhinac ah ayaa noqon karta daal. Markaa, xitaa haddii ay tahay inaad tijaabiso xoogaa dhinacyo kala duwan ah, waa inaad soo qaadataa mid aad jeceshahay.
Hadday suurtogal tahay, ka dooro bandhigga dhinaca warshadaha oo aad ogtahay inaad rabto inaad ka shaqayso muddo dheer. Habkaas, waxaad u adeegsan kartaa shaqada dhinac si aad u bilowdo xirfad aad ku raaxaysan doonto.
4. Tijaabi oo leh dhaqdhaqaaqyo dhinacyo kala duwan leh
Haddii aadan hubin waxaad rabto inaad u samayso gigab dhinac ah, hal shay oo aad isku dayi karto waa inaad u kala baxdo riwaayado dhinacyo kala duwan ah. Waa inaad naftaada u oggolaataa fursad aad ku tijaabiso shaqooyin kala duwan oo dhinac ah si aad u qiimeyso kuwa aad ugu jeceshahay.
Markaad awooddo inaad tan sameyso, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato xiisahaaga dhinaca, taas oo ka dhigaysa mid aad u fudud in la joogteeyo maalin kasta. Waxaad aad ugu dhowdahay inaad sii waddo wax aad ku raaxaysato oo aad kasbato lacag badan haddii aad ku raaxaysato.
Faa'iido kale oo ah inaad tijaabiso shaqooyin dhinacyo kala duwan leh ayaa ah inaad wax ka baratid naftaada iyo yoolalkaaga xirfadeed ee mustaqbalka. Dad badan ayaa ogaaday waxa ay rabaan inay noloshooda u qabtaan iyagoo aasaasay shaqo dhinac ah oo la xaqiijiyay inay guulaysanayso.
5. Wax badan ha qaban
Marka dadku bilaabaan inay qaataan mashruuc dhinac ah si ay u kabaan dakhligooda, mid ka mid ah khaladaadka ugu badan ee ay sameeyaan waa xad -dhaaf.
Yacni, waxay u shaqeeyaan si aad u badan, way gubtaan, ka dibna way waayaan xiisihii ay ka qabeen dhinacooda. Waa inaad tan iska ilaalisaa dhammaan kharashyada haddii aysan daruuri ahayn inaad bixiso biilashaada.
Inaad naftaada ku gubto riwaayad dhinac ah maahan waayo -aragnimo farxad leh, waxayna u horseedi kartaa hoos u dhac farxadda shaqada iyo noloshaada shaqsiyeed.
Haddii aad ka fekereyso inaad qaadatid riwaayad dhinac ah, hubi inaad haysato qorshe aad ku dheelitirto riwaayadda dhinacaaga iyo waajibaadkaaga kale.
Way fududahay inaad ku mashquusho xiisaha aad u qabto samaynta xoogaa lacag caddaan ah haddii aadan lahayn istaraatiijiyad meel taal, laakiin soo jiidashadaas ayaa laga yaabaa inay dhakhso u baxdo haddii aad waxyeello u geysato dhinacyada kale ee noloshaada.
17 Shaqooyinka Dhinacyada Kalkaaliyeyaasha Si Fiican U Bixiya 2021
20 Shirkadaha Kaarka Salaanta ah ee Aqbalaya Soo -gudbinta 2022 -ka
Ma leedahay xirfad aad ku qorto ama aad naqshadayso fariimaha xiisaha leh, kaftansan, soo jiidashada, dhiirigelinta, iyo fariimaha macaan ee leh…
Faallooyinka Qodobbada Tilmaamaha 2021: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Sharci & Fadeexad
Waxaa jira dhowr apps oo bixiya fursado ay lacag ku sameeyaan kaliya adigoo soo dejinaya oo isticmaalaya apps. Mid ka mid ah…
7 Siyaabood oo lagu helo mushaharka aadista iskuulka | Dakhli dadban oo hubaal ah
Haddii arday walba la siin karo lacag uu ku aado iskuulka, markaa, waxaan hubaa in iskuuladu mar walba buuxin doonaan.…
Haddii aad raadineyso inaad hesho dakhli yar oo dheeri ah, waxaa lagugula talinayaa inaad hesho waqti-dhiman oo wanaagsan…